Drama – SMMChannel
Peel 2019 Peel(2019) IMDb…..6.0 ဒီတစ်ခါတော့ ဒရမ်မာကား ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် 2019 မှာ အသစ်စက်စက် ထွက်ထားတဲ့ Peel ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ ….. ဒီထဲမှာတော့ ပီးလ်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ ဘဝအကြောင်းလေးကို ရိုက်ပြထားတာပါ….. ပီးလ် ငယ်ငယ်က သူ့အဖေနဲ့ အမေ အဆင်မပြေကြရာက ကွဲသွားကြပါတယ်……. ပီးလ်မှာ အစ်ကို ၂ ယောက် ရှိပါတယ် ……သူ့အဖေက သူ့အစ်ကို ၂ ယောက်ကို ခေါ်သွားပြီး သူကတော့ အမေဖြစ်သူနဲ့ နေခဲ့ရပါတယ်….. အမေဖြစ်သူရဲ့ သားတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ပုံကို သဘောမကျလို့ စကားများရာကနေ အိမ်က ထွက်သွားတဲ့ထိ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ ….. အမေဖြစ်သူက သားတွေကို ကလေးတွေလိုပဲ အမြဲ ကာကွယ်ပေးနေတယ် ကိုယ့်အားကို ကိုးတတ်လာအောင် သင်မပေးဘဲ ကလေးတွေလိုပဲ ပျိုးထောင်နေတာပါ …… အဖေ ခေါ်သွားတဲ့ အစ်ကို ၂ ယောက်ကတော့ ဘယ်လို ကြီးပြင်းလာလဲ မသိရပေမဲ့ ပီးလ်ကတော့ သူ့အမေရဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်နည်းတွေနဲ့ အမေနားမှာပဲ အမေချစ်သားအဖြစ်နဲ့ လောကကြီးအကြောင်း ဘာမှ မသိနားမလည်ဘဲ ...
The Wrestler 2008 The Wrestler(2008) IMDb…7.9,,,,,Rotten….98% ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး WWE channel က ပြသတဲ့ smack down ပွဲတွေကို ကြည့်ဘူးကြမှာပါ…. ပြောရရင် ကြိုတင်ပြဆင်ထားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကို လာကြည့်တဲ့ပရိတ်သတွေကို ရသ အပြည့်အ၀ပေးနိုင်မယ့် သတ်ပုတ်မှုမျိုးတွေကို ချပြရပါတယ်… ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအစဉ်ဆိုပေမယ့် ထိုးသတ်တဲ့နေရာမှာ ပရိတ်သတ်ထောင်ပေါင်းများစွာသော မျက်လုံးတွေ့ရှေ့မှောက်မှာတော့ တကယ့်ပျင်းထန်တဲ့ရိုက်ချက်တွေနဲ့ သတ်ပုတ်ပြရပါတယ်.. ဒါ့ကြောင့်လည်း ဒီပြိုင်ပွဲတွေဟာ အတုအယောင်လို့ဆိုရပေမယ့် ကမ္ဘာကျော်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်…. ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ဒါရိုက်တာ Aronofsky ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အဓိကဇာတ်ဆောင် နပမ်းသမား Randy the Ram (Mickey Rourke)အကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်… ဒီကားက သူ့ဘ၀ရဲ့ အနိမ့်အမြင့် အတက်အကျကို ရိုက်ပြထားပြီး သူတို့ဘ၀ရဲ့ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းပုံတွေကိုအကောင်းမွန်ဆုံးပုံဖော်ထားပါတယ်… ကြမ်းတမ်းခက်ထန်လွန်းတဲ့ လူ့ဘီးလူးကြီးတွေရဲ့ နောက်ကွယ်က နူးညံတဲ့နှလုံးသားကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်… ဒါ့ကြောင့်လည်း ဒီကားဟာ ချီးကျူးမှုပေါင်းများစွာရရှိထားသလို အော်စကာဆန်ကာတင် (၂)ဆုနဲ့ အခြားဆုပေါင်း (၅၈)ဆု ရရှိထားပါတယ်…. ပြီးတော့ ဒီကားဟာ သတ်ပွဲပေါင်းများစွာပါသလို သွေးထွက်သံယိုခန်းတွေလည်းပါတာမို့ သတိထားကြည့်စေလိုပါတယ်…. ရုပ်ရှင်ရဲ့ Rating က R ဖြစ်တာကြောင့် အဖော်အချွတ်ခန်းတွေ ပါတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ အတူကြည့်ဖို့မသင့်တဲ့ ကားတကားလို့ ပြောပါရစေ…. ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Chan Myae Thu ...
IMDB: 7.9/10 276,306 votes